အိ်မ် သာတော့ ဧည့်လာတာပေါ့။ (အိမ်သာ မဟုတ်ပါ)
MG ရွာသို.လူဆိုးတွေဝင်ခြင်းဆိုတဲ. ဆောင်းပါးမှာ
ဦးပေါက် ရဲ.နာမည်ကို ငပေါက်လို. သုံးမိတာကိုအထူးတောင်းပန်ပါတယ်ခဗျာ
ဦးဖတ်တီး ပြောသလို ကျွန်တော်ရိုင်းသွားတာဝန်ခံပါတယ်။
အမှန်ပြောရရင် ကိုပေါက်တို. ဦးဖတ်တို.က ကျွန်တော. အဖေအရွယ်တွေပါပဲ
ကျွန်တော်အခုမှ အသက် 19 နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။
သူကြီး ခင်ဗျား ။ မသိတာလေး မေးချင်လို ့ဖြေပေးစေချင်ပါသည် ခင်ဗျား ။ 21.6.2011 ကျွန်တော် တင်တဲ့ ပို ့စ်မှာ edit ထဲ တွင် တော့ Word count: 984 လို ့ဖော်ပြ ထားပါတယ် ။ တစ်ကယ်တမ်း home page ကနေ ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ has wrote 23 articles on this blog. လို ့ပဲ တွေ ့ရ ပါတယ် ။ အဲဒါ ဘယ်လို ကွာခြား သလဲ ဆိုတာလေး သိချင်ပါသဖြင့် ကျေးဇူးပြု ပြီး ဖြေပေးပါ ခင်ဗျား ။ ကျေးဇူး တင်ပါသည် ခင်ဗျာ ။
Word count: ဆိုတာက.. အဲဒီ Edit လုပ်နေတဲ့ စာတွေရဲ့ စာလုံးအရေအတွက်ဖြစ်ပြီး… home page ကနေ ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ has wrote 23 articles on this blog. ဆိုတာက… ကိုရင်က.. ဒီရွာထဲ.. စာ ၂၃ပုဒ်ရေးပြီးသားဆိုတဲ့..အဓိပါယ်ပါ…။
Word count ကလည်း ချက်ချင်း အလုပ်မလုပ်ပါဘူး သဂျီးရဲ့…. ။ နည်းနည်းကြာတယ် ။
စာရေးရ နည်းနည်း ပျင်းနေလို့ comment တွေပဲ ပေးနေရတာ အားနာပါတယ် .. အခုတလော လူသစ် အဝင်များတာကို ကြိုဆိုချင်ပေမယ့် .. အရေးအသားမှာ သိပ် မဟန်တဲ့လူတွေလဲ ပါတယ် (မဟန်ဘူးလို့ ဆိုတာ မကောင်းတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး .. နည်းနည်းများ ရိုင်းသလားလို့ပါ)
Dr ကို dislike လုပ်တာလည်း လူသစ်တွေပဲ ဖြစ်ရမယ်
ဒီဆိုက်ရဲ့အကျိုးအတွက် အများရှေ့ထွက်ပြီး အမုန်းခံပြောပေးနေတဲ့ ဆူး ၊ etone အပါအဝင် မန်ဘာဟောင်းများကို ချီးကျူးပါတယ်။ ကိုယ်က လူဟောင်းပဲဆိုဦးတော့ နောင်အဆဲမခံရအောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလို့လဲ ရလျှက်သားနဲ့ မနေနိုင်တာကိုက ရွာအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို မြင်သာစေပါတယ်။ အဲသည်လိုမန်ဘာများ ရအောင်စုဆောင်းထားတဲ့ ဆိုက် အက်ဒမင်ကိုတော့ (ဖါးတယ်ထင်မှာစိုးလို့) ထည့်မချီးကျူးတော့ပါဘူး။
တကယ်လို့များပေါ့လေ – ပညာရှင်တွေများတယ်ဆိုတဲ့ ဒီဆိုက်မှာ တင်လာတဲ့စာမူ post တွေ အရည်အသွေး အရမ်းနိမ့်နေရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဝေဖန်ပေးမယ့် စေတနာရှင်တွေများရှိလာရင် ပိုစ့်တင်သူတွေက ပိုဂရုစိုက်လာမှာမို့ ဒီရွာကြီး အခုထက်ပိုပြီး လှပလာမှာပါ။
(ဒါတခြားပိုစ့်တခုမှာပေးထားတဲ့ ကွန်မင့်ပါ။ ဒီမှာလဲ ထည့်သင့်တယ်ထင်လို့ပါ။)
သဂျီးရေ .. ဒီမှ ပို့စ် အသစ်တင်ပြီးပြန်ပြင်ဖို့ဟာ အရင်ကလို Edit မပေါ်ပဲ No related posts လို့ပဲပေါ်နေတယ် log in လဲ လုပ်ထားပြီးသားပဲ ဘာဖြစ်တာလဲဟင် ..
site admin ထဲကို ပြန်ဝင်ပြီး posts ကို နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် … အဲဒီတော့မှ ပြင်ချင်တဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို edit လို့ ရပါတယ် ….
အရင်နဲ့ မတူတော့ဘူး နွယ်ပင်ရေ …
ရွာသားတွေ တယောက်နဲ့တယောက် အဆင့်တူတူမဟုတ်ပါဘူး..။ အုပ်စုတွေခွဲထားပါတယ်..။
သနားစရာ ကောင်းလိုက်တဲ့သူကြီးရယ်၊ one star ပဲ ရသေးတယ်။ ;)
(ရွာသားတွေ တယောက်နဲ့တယောက် အဆင့်တူတူမဟုတ်ပါဘူး..။ အုပ်စုတွေခွဲထားပါတယ်..။)
ဆိုတော့ – အုပ်စုဘယ်နှစ်စုရှိပြီး ဘယ်လိုခွဲသလဲ၊ ဘာကို မူတည်ပြီးခွဲသလဲ (ဥပမာ- ပိုစ့်တင်တာကို မူတည်ပြီး ခွဲတာလား၊ ရွာသားဖြစ်တဲ့ အချိန် အနုအရင့်ကို မူတည်ပြီး ခွဲတာလား၊ ကွန်မန့်ကို ကြည့် ခွဲတာလား။) သိခွင့်ရှိရင် သိချင်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်တာရော၊ ရွာသားဖြစ်တဲ့ အချိန် အနုအရင့်ရော၊ ကွန်မန့်အရေအတွက်ရော.. အားလုံးတခုစီမှာ အုပ်စု Role တွေရှိပါတယ်..။
တဦးချင်းစီမှာလည်း… အသေးစိတ် Capabilities တွေရှိပါတယ်.။
အဲ့ဒါက ဘယ်လို ကြည့်ရင် သိနိုင်တာလဲ … ။
အဲဒါအက်မင်ကလွဲလို့ … ကြည့်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး..။
ဒီနေ့ 22.6.2011 တွင် jimsmilion ဆိုသူမှာ စည်းကမ်းချက်နှင့်မညီ တနေ့ထဲပိုစ့် ၆ခု တပြိုင်နက်ထဲတင်ပါသည်။ အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်အား မည်သို့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမည် သိချင်ပါသည်။
My personal Scenario UtilizingaReverse Mobile phone Directory
– jimsmilion |4- Hits|
Posted by jimsmilion on Jun 22, 2011 in Computer & Cell Phone | Comments Off
Tips On How To To Accomplish A Cellphone Reverse Hunt
Reverse Cell Phone Lookup Providers Can Aid With Unidentified Callers
Just What Reverse Cell Phone Lookup Provider Great For
Reverse Cell Phone Lookup To Get The Identification Of An Anonymous Call
Utilize Reverse Cell Phone Look To get The Personal Data
အင်း..အိပ်တော့ မနက်၄နာရီ..။ ထတော့ ၈နာရီ..
အဲဒါ.. လူမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါကြောင်း…။ ကွန်ပျျူတာက.. spam control ရပ်နေခိုက်.. ဝင်ရေးသွားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်း…။
အကုန် (မန်င်ဘာအမည်ရော..စာတွေပါ) ဖျက်လိုက်ကြောင်း…။
Car Stereo And also your Auto – magaretgarza
အရေးယူပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် သတင်းပို့ စရာ ရှိလာလို့ ပို့မည့်ဆဲဆဲ ဖျက်လိုက်တာ တွေ့ပါကြောင်း။ သူကြီး၏ အရေးယူမှုကို အထူးပင် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း
ရွာ အတွက် သူငယ်တန်း ဖတ်စာ အသစ် ဖြစ်ပါသည်။
သာကူ = သာ ကူး
သူကြီး ဆာဗာကျပ်အောင်လုပ်လိုက်ရမလား။ ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ်လျှင် ဇွန်လ ၅ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းလုပ်ဆောင်ပါမည်။
erose ရေ လူသစ်တွေကိုတော့ လျှော့ပေါ့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ post ဘယ်နှစ်ခုတင်တင် post 2ခုပဲ ပွိုင့်ပေးရင်ပြီးတာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ၂ခုထက်ပိုတင်ရင် ပွိုင့်လုံးဝမပေးနဲ့ပေါ့။ ရေးတဲ့ post လေးတွေကအဓိပါယ်ရှိမရှိ ၊ ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့post တွေ ဆို ဘယ်နှစ်ခုတက်တက် အားပေးသင့်ပါတယ်။
nature ရေ စည်းကမ်းဆိုတာ မည်သူမဆို လိုက်နာရမှာ ဖြစ်တယ်။ အသစ် အဟောင်း မခွဲသင့်ပါဘူး။ မည်သူကိုမှ လျှော့ပေါ့စရာ မလိုပါဘူး။ တချို့ အသစ်တွေဟာ စည်းကမ်းကို ထောက်ပြ သတိပေးရင်တောင်မှ ရင့်ရင့်သီးသီး တုံ့ပြန်နေတာ တွေ့နေရတယ်။ စည်းကမ်းတွေဟာလည်း မြင်လွယ်တွေ့လွယ်တဲ့ နေရာတွေမှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ပိုစ့် ၂ခုသာ တင်ရန်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းဟာ ရေးသူများအားလုံးရဲ့ ပိုစ့်ဟာ ရှေ့စာမျက်နှာမှာ အချိန်ကြာကြာ ကျန်ရှိပြီး ဖတ်မိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှိလာတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီစည်းကမ်းဟာ အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ ဒီစည်းကမ်းကို ကိုယ်ကိုတိုင်က တနေ့ ပိုစ့် ၃ခု သို့မဟုတ် ၃ခုမှ ၅ခုလို့ အကြံပေးချင်ခဲ့ ပေမယ့် လူအများက နှစ်ခုကို သဘောတူတာရယ် ကိုယ်ကိုတိုင်က ကောင်းတယ်လို့ နည်းနည်း ထင်တာကြောင့် ဘာမှမပြောပဲ လက်ခံခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ သိပ်ဘဝင်မကျလှဘူး။ ၃ပိုစ့်ဖြစ်သင့်တယ် လို့တွေးနေမိခဲ့တယ်။
အခုဒီကိစ္စကို ပြောနေတာဟာ စည်းကမ်းလိုက်နာရန် အတွက်ကြောင့် ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပွိုင့် အတွက်ပြောနေတာ မဟုတ်သလို ပွိုင့်ကလည်း ဂရုစိုက်စရာ မက်စရာ မဟုတ်ပါ။ ရေးနိုင်သူတွေ ပွိုင့်များများရလို့ မုဒိတာပွားပါတယ်။ စည်းကမ်းသည် အများအတွက် ဖြစ်လာတာကြောင့် မည်သည့် အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ ချိုးဖောက်ခွင့်ပေးစရာ မလိုပါ။ ရေးသူတိုင်းတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပိုစ့်များရှိနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ပိုစ့် ၂ခုသာ တင်ရန်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းဟာ ရေးသူများအားလုံးရဲ့ ပိုစ့်ဟာ ရှေ့စာမျက်နှာမှာ အချိန်ကြာကြာ ကျန်ရှိပြီး ဖတ်မိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှိလာတာ ဖြစ်သောကြောင့် လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်။
nature ကို ခင်မင်လျက်
ယနေ့ comment off တွေနဲ့တင်လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီ လေးကိုယ်ခွဲပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ရဲ့ အရေးအသားများဟာလဲ encyclopedia တွေမှာ ရေးထားတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနဲ့ တော်တော်လေးဆင်တူအောင် ၊ ကူးထည့်ထားသလား လို့ထင်ရအောင်ကို လက်ရာမြောက်ပါတယ်။
၎င်းတို့က comment off ထားလို့ ဒီမှာကွန်မင့်ဝင်ပေးပါတယ်။
ကော်ပီ ရေးလို့ ရွာသားများ ကန့်ကွက်မှုကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်ရမ်းသွားပါတယ်။
လင့်က ပိုစ်မှာ.. ဖတ်ကြည့်ပါ
ဆရာကြီး စတိုင်နဲ့ လာပြီး ရွာက လူတွေကို ဆုံးမ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွာသားများ အသစ်လေးများကို နာကျင်အောင် မပြောပါနဲ့ ဆိုပြီး ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ စာသားများကအီးမေးတွေ တကာမှာ လှည့်နေတဲ့ ပိုစ်တွေ ထဲက စာသား တချို့ကို ကောက်နုတ်ပြီး တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူများ ဦးနှောက် ဖောက်စားတာ ဝါသနာ ပါပုံကတော့ ခပ်တည်တည် လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမှမပြောတတ်အောင်ပါဘဲဆူးရယ်။ မေတော့ တခါတခါ သိပ်အာရုံနောက်တာဘဲ။ တကယ်ကို ဘာမှမပြောတတ်အောင်ပါဘဲလို့ ဖြစ်နေပြီ။ မေပြောတာသိလား။
အဲ့ဒါသိတယ်လေ … နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့ လာနှပ်သွားတဲ့ လူကို ဝင်ပြီး မန်းပေးတဲ့ လူတွေကလည်း ရှိသေးတယ်… ။ တခါတလေ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ အတိုင်း ရေးပစ်လိုက်ချင်တယ် အရမ်းကြီး ပြောလိုက်လျှင် ပြန်အားနာနေရမှာ စိုးလို့ …. ။
ဒါပေမဲ့ etone တို့ က အမုန်းခံရဲတယ်။ ပြောရဲတယ်။ရွာထဲမှာနေတာကြာပြီဆိုတော့ ရွာကိုသံယောဇဉ်နဲ့ ရှေ့ထွက်ပြီး တက်တက်ပြောတာကိုတော့ သဘောကျတာအမှန်။
ခက်တာက လူတွေက အလွယ်ကြိုက်နေကြတာပါ။
စိတ်မှာ တွေးမိတာ အဆိုး အကောင်းတွေ…
လှပတဲ့ နေညိုချိန်လေးကို ရောက်ဖို့…
အိပ်မပျော်သော သူအဖို့ ညတာသည်ရှည်၏
သူတော်ကောင်းတရား မရှိသူအဖို့ သံသရာသည်ရှည်၏..
မန်းဂေဇက် သဂျီးနှင့်အတူ.. ရွာသူ..ရွာသားများ၏ ခရီးသည် ဘယ်ကိုများ ဖြစ်မှာပါလိမ့်…
ဘယ်ကိုများ ဦးတည်ပါလိမ့်…… အနာဂတ်ကို ကြိုလွမ်းကြည့်မိတယ်..
မန်းဂေဇက်မှာ သွားရမည့် ခရီးတွေ မိုင်ပေါင်းများစွာ…. (ရှိနေပါလိမ့်မည်..)
ကျေးဇူးပြု၍ ဦးတည်ချက် မတူသူများ နေရစ်ကြပါ…
သင်တို့ကြောင့်.. မန်းဂေဇက်၏ ခရီးအား အဟန့်အတား မဖြစ်ပါစေလင့်…
ဦးတက်ချက် တူညီသူများ ဖြစ်ပါက..
မန်းဂေဇက်၏ စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာခြင်းဖြင့်.. ဘေးကင်းစွာ ခရီးဆက်ကြပါစို့…
Federal Government Do Not Phone Call Vs Reverse Lookup Mobile Phone Search –
အသားစားတာ အန္တရာယ်ကင်းလား အသီးအရွက်စားတာ အန္တရာယ်ကင်းလား။ – eros
မည်သို့ မည်ပုံ edit လုပ်ရမည် မသိသောကြောင့် အသစ်တခုတင်လိုက်မိပါသည်။ ပိုစ့်ဖျက်ပေးပါရန် နှင့် ပွိုင့် လျှော့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ရီဂျစ်စတာ.. ရွာသားအသစ် လက်ခံတာခဏပိတ်ထားပါတယ်..။
မနေ့ကစပြီး.. Spam သမားတွေ.. ဝင်လာတာမို ့ပါ..။
ရွာထဲ ဝင်ချင်တဲ့ တရွာသားတွေ.. ကျုပ်တို့ရွာသားကတဆင့်… မေးကြပြောကြပေါ့..။
စိစစ်ပြီး လက်ခံမလားလို့ စဉ်းစားတာပဲ..။
မန်ဘာကို ၂ ဆင့်ထား။
စဝင်တဲ့အဆင့်မှာ ကွန်မင့်ပဲပေးလို့ရ။ vote လုပ်လို့ရ။
ကွန်မင့်တွေအရေအတွက်တခုရောက်လာတဲ့အခါ admin က ကွန်မင့်တွေပေါ်သုံးသပ်ပြီး လက်ခံသင့်သူကို မန်ဘာဝင်ဘို့ invite လုပ်။
အဲဒီတော့မှ မန်ဘာနောက်တဆင့်ဖြစ်ပြီး ပိုစ့်တင်လို့ရ။
ခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ ရေးမိတာပါ။ လူတတ်ကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါ။ ဒီရွာထဲကဆရာကြီးးများကိုလဲ ကြောက်ပါကြောင်း။
ဆူး လည်း အဲဒီ စိတ်ကူး ရှိတယ် သူပြောတာ ထောက်ခံ သွားတယ်။
mandalay gazette ရဲ့ site ပုံစံအသစ်ပြောင်းသွားတော့ ပို့စ်ကိုပြင်ချင်ရင် edit မလုပ်တတ်တော့ဘူူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူကြီး။ ပြီးတော့ ပိုစ့်တင်မယ့်စာတွေများနေရင် အကုန်မပေါ်ဘူးလား။ အများဆုံး ဘယ်လောက်ထိဖော်ပြပေးပါသလဲ။
နို့မဟုတ်ရင်သာလာယံဇရပ်လို ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိူထွက်ဖြစ်သွားမယ်။
Rank မှာ silver လို့မြင်ရပါတယ် …..
rank ဘယ်နှစ်ဆင့်လောက် ရှိပါသလဲခင်ဗျား Gold တို့ Diamond တို့ရောရှိပါသေးလား
ကြွားတာ ဟုတ်ဘူးနော်.. ငွေထက် မြင့်တဲ့ ရွှေ ရှိသလို ဆူး ကတော့ ပလက်တီနမ် ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ စိန် အဆင့် ရောက်မလား မပြောတတ်ဘူး အခုတောင် ရွာထဲမှာ ပိုစ်တင်ရမှာ စိတ်ကုန်လို့ စာမရေးတာ ကြာပြီး သူများ ရေးတာ ဖတ်ပြိး လိုက်မန်းနေရတယ်။
All (4,660) | Administrator (3) | Editor (2) | Author (14) | Contributor (32) | Subscriber (4609)
သူကြီးရေ အရင်က ရွာထဲဝင်ရင်
ကိုပေါက်ကြီး ကျွန်တော်လည်း ဖြေရတယ် ပထမဆုံးနေ့က ကျလို့ နှစ်ခါဖြေလိုက်ရသေးတယ်
အခုတော့ တစ်ခါထဲနဲ့ အောင်နေတာပဲ
အရင်က တင်ပြီးသားပို့စ်မှာ Categories ပြန်ခွဲချင်ရင် အက်ဒစ်လုပ်ပြီး ခွဲလို့ရတယ်…။ ခုမရတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ …။ သူကြီးက ကော်ပီအင်ပေ့စ်တွေချည့်အောတိုလုပ်ထားတာ အဲဒါပဲပေါ်နေတော့တာပဲ ပြင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်…။
သူကြီး … ပို့စ်တင်တာမှာ ပြသနာရှိနေပြန်ပြီ …
ဓါတ်ပုံလဲ တင်မရဘူး … save draft လုပ်လို့လဲမရဘူး … ရေးထားတာတွေ အကုန်ပျောက်သွားတယ် ….
ကြည့်ရတာ.. ဘက်ကပ်အချိန်တဲ့ တိုက်သွားတယ်ထင်တယ်..။ အခုလေးတင်လုပ်နေတာ..။
beta အဆင့်ပါ..။ နောက်၂-၃ရက်လောက်နေမှ.. ကြေငြာပါ့မယ်..။
ကျမလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ ရေးထားတာတွေ ပျောက်သွားတော့ ဆက်ရေးချင်စိတ်တောင် ကုန်သွားတယ်။
(ဘက်ကပ်အချိန်တဲ့ တိုက်သွားတယ်ထင်တယ်..။ အခုလေးတင်လုပ်နေတာ..။) ဆိုရင် တနည်းနည်းနဲ့ မပျောက်အောင် လုပ်လို့ရရင် ကောင်းမယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော့်အဆင့်မှာ တိုင်တေနီယမ်လို့ ပြနေတာကိုး….ပို့စ်တခါတင် ၅၀၀၊ တခါမန်းရင်၄ဝ တက်တက်သွားတယ်။ ထူးဆန်းတယ်ထင်နေတာ အခုမှသိတယ်။ နောက်ဆုံးတင်တဲ့လင်္ကာဆိုရင် ပွိုင့်၁၀၀ဝ တောင်ရတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် သဂျီးခင်ဗျား
ပလက်တီနန် ဆိုရင် အတော်မှတိသားဖွယ်ရာလေးတွေရေးနိုင်လို့ထင်ပါရဲ့နော်။
တို့ကတော့ Newbabies လေးပါကွယ်
မနော ဟိုနေ့က တင်တာ ကွန်နက်ရှင်ပဲကျလို့လား၊ ကော့မန့်အော့လည်းဖြစ်သွားသလို စာတွေလည်း တစ်ပိုင်းပဲ ပါသွားပါတယ်ရှင်။ ပြန်ပြင်ဖို့ edit လည်း မရဘူး။ ဘယ်လိုမှလည်း ရှာတာ မတွေ့လို့ပါ။ ဒါနဲ့ သဂျီးပဲ ဖျက်ပါစေဆိုပြီး ထားလိုက်တော့တာပါရှင်။
ဗျို့ သူကြီး ဘာဖြစ်လို့ Point က 5245 ဆိုပြီး အစွန်းထွက်နေတာလဲဟင်
သဂျီးရေ…ပို့စ်တွေ တင်ပြီးသွားရင် အက်ဒစ်ပြန်လုပ်လို့မရဘူးနော်… အဲ့ဒါလေး ပြန်လုပ်ပေးဦး ဒုက္ခရောက်လွန်းလို့ …. ။ အလကားပွိုင့်တွေ တိုးလာမှာစိုးလို့
ပုံက တပုံထဲဆို အစကတည်းက သေးအောင် ဆိုဒ်ချုံ့ပြီးတင်ပေါ့…
နှစ်ပုံသုံးပုံဆိုလျှင်တော့ …ပုံတွေ အားလုံး အရင်တင် ပြီးမှ insert gallery ဆိုတာနဲ့တင်လျှင် ဘယ်လောက်ကြီးကြီး လေးထောင့်ကွက် အသေးလေးတွေပဲပေါ်တယ်… ။
ကြီးချင်လျှင်တော့ တပုံတင်လိုက် insert into post လုပ်လိုက် … တပုံတင်လိုက် လုပ်လိုက်နဲ့မှ အဆင်ပြေတယ်… နောက်ပိုင်းအ ထာနပ်သွားလိမ့်မယ်… ။
ကိုယ်တိုင်ရေး စာမူတော့ စာမူပါ ..
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်လောက်က မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါပြီးသားတွေ မေ့လောက်ပြီ ထင်တာရယ် .. အကျိုးရှိမယ် ထင်တာရယ် တင်ချင်ပါတယ် .. တင်ခွင့် ရှိ မရှိ
ကိုယ်တိုင်ရေး စာမူ ဆို တင်ပေါ့.. ကိုုယ့် ပစ္စည်း ကို ကိုယ်တိုင် အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ဘာမှ ပြောဘူး.. အန်တီ လုပ်သာ လုပ်.. အားပေးတယ်။
သဂျီး အစား ဖြေပေးလိုက်သည်။
ကျနော်ကတော့ အကျိုးရှိမယ့်စာဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တင်ဖို့အားပေးပါတယ်။
ပွိုင့် စနစ် ပြင်ထားတာ ဒီနေ့မှ သတိထားမိတယ်။
မန်းပြီးသား ပိုစ်တွေ ဆို ပွိုင့်လုံးဝ မရဘူး
ကိုယ်ပိုင် ပိုစ်တွေမှာ လာမန်းတဲ့ လူ ရှိရင် ပွိုင့် ၅ ရတာ တွေ့တယ်။
ပိုစ် အသစ်တွေမှာ လိုက်မန်းရင် ပွိုင့် ၁၅ ရတာ တွေ့တယ်။
သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ထားတာလေး လာပြောပြတာ.. ဒီ ပိုစ်မှာ မန်းပြီးသား ဖြစ်လို့ အခု မန်းတာ ပွိုင့် မရပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ဟုတ်လား … သတိတောင် မထားလိုက်မိဘူး …စမ်းကြည့်ဦးမှပဲ
ပို့စ်အသစ်တစ်ခုကို 80မပေးပဲနဲ့ 50လျော့ပေးတာကော သတိထားမိသေးလား ဆူးမရေ………
သူများတွေ ကော်ပီအင်ပေ့စ်လုပ်လည်း အဲသလောက်ပဲနဲ့တူရဲ့
ပို့စ်အသစ်တင်ရင် ၅ဝ ပဲ ပေးပေမယ့် ကွန်မန်းတစ်ခုတက်တိုင်း ၅ မှတ်တိုးပါတယ် …
Daily Points 20 ပြန်ပေးထားတာ တွေ့တယ်။
သဂျီး အခု အနေအထားက စမ်းသပ်ကာလလား အတည် မထုတ်ပြန် သေးဘူးနော်။
ပွိုင့်ပေး စနစ် အနေအထားကို ရွာသားတွေ ကြိုက်မကြိုက် အကြံပေးတာ စောင့်နေတာလား။
ရွာသားများ ပွိုင့် ပေးတာ ဘယ်လို မျိုးလဲ သိချင်ရင်
ပေးထားတဲ့ လင့်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Thank ဆူး ….
ကျေးဇူးပါ ဆူးရေ။ ပွိုင့်ပေးတာ ပြောင်းနေမှန်းတော့ သိတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းမှန်း မသိဘူး။ ခုတော့ သွားကြည့်ပြီးသွားပြီ။
Edit လုပ်လို ့ရဝူး..